Last nohavaozina: Dec. 27 2017 | 2 min namaky
…Na dia amin'izao fotoana izao ny "overachievers" miraharaha ny fifandraisana?
"Efa tonga lavitra, Baby,", Hoy ny dokam-barotra malaza nitehaka ny fivoaran'ny ankehitriny ny vehivavy. Ary efa tonga tokoa!
Vehivavy Efa nivahiny tany avy amin'ny andro sy ny vanim-potoana izay tsy afaka na dia nandroaka vato, ny ara-politika mba hatao ho isan'ny powerhouses amin'ny.
Na dia ao amin'ny orinasa kianja filalaovana, dia maro amintsika no niakatra tohatra ho mpitarika orinasa anjara asa, ny fitantanana ny sampan-draharaha lehibe sy ny teti-bola izay matetika eo ambany fahefan'i olona.
Manampy izany ny hoe matetika isika no manana ny tokantranontsika, hizaka ny vola, isika sy manana ny heviny manokana. Ary ny tenin 'ny fihirana vondrona, Destiny ny Child, "Tsy miankina amin'ny ahy, raha tiako izany. "
Bravo roa! Take a Bow.
Fa, Ity ny varotra eny…
Ankehitriny ny vehivavy mahomby dia mety ho handresy amin'ny raharaham-barotra raha ho very ny fitiavana.
Ary eto no mahatonga.
Maro loatra isika no tsy manaiky fa maro ny toetra izay mamela antsika mba hanapaka ny boardroom, Mety hahatonga fatiantoka ho ao amin'ny efitra fatoriana. Salama?!
Ao amin'ny ady ny sexes, isika no nandresy tamin'ny ady, fa ho very ny ady?
Na, ny tenin 'Dr. Phil, "Ahoana no fa workin’ fa ny '?"
Ireto misy toe-javatra fahita efatra izay mampiseho ny fomba emasculate indraindray ny olona kanefa tsy tonga saina izany.
Angamba ianao meloka ny vitsivitsy. Vakio ao, izahao izay.
NY "Tena NY LALANA NA NY lalambe" toe-tsaina— Antoka, toerana ny fahefana eo amin'ny tontolo asa mamela antsika mba hibaiko ny faniriantsika ho an 'ireo hoe iza no manakarama sy handoavana ny asa. Fa, fifandraisana manokana isan-karazany. Ry zareo tokony ho fiaraha-miasa izay roa tonta’ sy ny fihetseham-po no mila nipetraka, tsy anjara asan'ny ray aman-dreny na ny famonjena.
Zara-taniny dia tafahoatra—Andriamanitra anie hitahy ny zaza izay no nahazo ny. Ary ny sasany amintsika tsy hamela na oviana na oviana ny vady mahafantatra fa ny fananany ara-nofo dia ny byproducts ny fahombiazana sy ny an'ny ho antsika irery ihany, indrindra ao amin'ny hafanana ny tohan-kevitra iray. "Ny tranoko, ny fiara, ny vola. "My teny!
"IZAHO VEHIVAVY HENOY ME mirohondrohona "aretina—Avy ny fahaiza-manao manokana ny vola sy manome noho ny hahasoa, ny fiterahana sy ny fananganan-jaza safidy izay afaka X olona avy tamin'ny isan 'andro mira ny fiainana, ny sasany amintsika no manome ny hafatra izay lehilahy ireo dia dispensable eo amin'ny teny sy ny fihetsika.
Taking BIG dia mitsangana eo amin'ny MADINIKA olana—Famakiana ady amin'ny teny manome ny vehivavy sasany fahatsapana ny hery sy ny maha zava-dehibe, nefa mamela ny olona nikomy sy mahari-pery ny fiovana.
Strong Tsy ratsy foana.
Fa matetika no tsara kokoa mizana.
Afaka manana azy ny vehivavy rehetra?
Antoka, fa ny olona gotta’ mandoa ny kiheba— izay miantso kely hanomezana sy haka sy ny fahaiza-manao toy izany koa savvy anabavy fifanakalozan mampiasa avy 9 ny 5. Sady koa anie, araka ny Billy Dee William milaza Diana Ross ao amin'ny sarimihetsika rotra, "Fahombiazana raha tsy misy ny mizara izany amin'ny hoe nothin '!"